Izvo uye sei zveKurudziro Injini - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
eCommerce, Magento, Inokurudzira Injini, zvigadzirwa zvetekinoroji, zvigadzirwa zvetekinoroji, Wordpress
Izvo izvo & sei zveMazano Enjini
WordPress uye Magento vane mukurumbira zvakanyanya munyika yeblogging uye eCommerce zvichiteerana. Kune nzira dzakawanda dzekubatanidza Magento uye WordPress kugadzira a Website iyo ndiyo imwe nzira inoshanda kune chitoro chezvidhinha nedhaka. Zvose izvi Mapuratifomu vane yavo seti yemabhenefiti asi kuvabatanidza kunogona kubatsira nenzira dzakawanda, imwe yacho iri injini yekukurudzira.
Chii chinonzi Injini Inokurudzira
Wese mutengi ane akati wandei sarudzo uye nzira dzekusarudza. Zvingave zvekuwana bhuku rekuverenga zvisinei nerudzi kana kubuda mucafe. Pachave nemapani akati wandei pairi Indaneti. Nekudaro, kana iwe wakatoverenga bhuku uye uchitsvaga senge pane genre saka sarudzo ichave shoma. Hechino chinhu, pane kusefa iyo Indaneti kuti uwane mimwe mhedzisiro yakakodzera, zvichave zviri nani kuve nenzira yekubuda nayo. Isu tiri kutaura nezve application yaunokwanisa kungopinda mukati woita kuti basa riitwe.
A injini yekukurudzira achaita izvozvo chaizvo. Kune akati wandei emabhizinesi ari kunyatso shandisa simba remhando iyi yeinjini kuwedzera kutengesa. Kunyangwe isu tichitaura nezveNetflix kana Amazon (Kindle, Prime kana Amazon chitoro), iri kwese. Iwe unogona kufunga nezvayo sesefa inoshandisa yakasiyana algorithm kutarisisa zvinhu zvakakosha kune vateereri vavo. Izvo zvinoitwa pahwaro hwekare maitiro emutengi kuburikidza iyo iyo Software inokurudzira zvigadzirwa zvinonyanya kudyiwa navo.
Injini yekukurudzira inoshanda sei
Iyo sisitimu inogona kukurudzira zvirinani chigadzirwa chiri nani kwazvo kumutengi icho chinonyanya kufarirwa. Zvakare, ichaganhura runyorwa rwezvigadzirwa maererano nezvinodiwa uye zvakare zvinhu zvinokurudzirwa. Mune zvese, mamiriro acho ezvinhu WordPress Magento Kubatanidzwa kunogona kuuya kunobatsira ne Injini yekukurudzira.
Yekutanga, sezvo, ichatarisa mukurumbira, nekudaro, vese vatengi vanozove neakafanana kurudziro. Ipo, mune yechipiri kesi, maficha acho achawedzera nevanoverengeka vashandisi. Izvi zvinoita kuti rive basa rakaoma kupatsanura zvikamu mukati maererano nenhoroondo yemushandisi.
Iyo yakakosha nyaya iyo yakatarisana mune yakadai mamiriro ndeyekuti yakatarwa kufarira yemushandisi inotorwa ichitariswa. Izvo zvakakosha kuti ushandise yakasarudzika nzira iyo inogona kubatsira mune chigadzirwa kurumbidza nenzira kwayo. Pane matanho akasiyana siyana anoteverwa kumusoro nehurongwa senge:
Paunovaka injini yekukurudzira nokuti WordPress Magento Kubatanidzwa, zvakakosha kuunganidza data - zvisina kujeka kana zvakajeka. Iyo data ichapihwa mukati ichave yakajeka data senge yekuisa mushandisi. Ipo iyo data inounganidzwa kuburikidza nekutepfenyura uye isina kupihwa mukati inonzi yakasarudzika data senge nhoroondo, kurongeka, kudzvanya, nezvimwe.
Kana iwe uchida kutarisa kuti yakanaka sei yekurudziro yemhando yakapihwa inogona kuve saka zviri nani kuti utarise huwandu hwakatemerwa hwedata. Inogona kunge iri chiyero, maodha, nezvimwe. Kana kurudziro yehurongwa hwakanaka saka zvinoreva kuti mushandisi achazviwana. Dhata ndicho chikamu chakakosha chehurongwa hwakadaro hunobvumira mutengi kuwana zvakavanakira. Mhando yekuchengetedza inosarudzwa nerubatsiro rwemhando yedata chete. Kune akawanda mazinga anogona kusarudzwa neakapihwa chengetedzo senge NoSQL, SQL Database, Etc.
Kana iko kuunganidzwa kwedata nekuchengeterwa kwaitwa saka zvakakosha kuti uisefa. Izvi zvinobatsira mukutora ruzivo rwunoenderana nezvinodiwa nemutengi. Nekudaro, kurudziro yekupedzisira inogona kuverengerwa nayo. Kuti uwane izvi, unofanirwa kutevedzera akasiyana algorithms izvo zvinogona kukubatsira kuti uite nazvo. Kune akasiyana algorithm akadai gutsikana-yakavakirwa kusefa, Kudyidzana kusefa uye Hybrid modhi.
Blogging uye eCommerce maficha ane Kurudzira Injini
Iko kune makuru mana ekugadzirisa ayo anogona kushandiswa kune Kurudziro system. Izvi zvinosanganisira:
WordPress ine eCommerce plugin
WordPress haigumiri pakubhuroga zvakare. Kana chimwe chinhu, ne WordPress 5.0, tinogona kutarisira zvinhu zviri nani nazvo. Kune akasiyana plugins - emahara uye premium - anogona kushandiswa zvakakwana eCommerce Website. Kunyangwe iri module yekubhadhara kana ngoro, unogona kushandisa chero plugin kuzadzisa zvaunoda. Kwakareruka kubatanidza uye zvakare zvakareruka pane Magento. Iwo mapulagi anogona kushandiswa ndeye WooCommerce, TheCartPress eCommerce Ngoro yekutengera, nezvimwe.
Magento ine yekuwedzera blogging
Panogona kuve nedambudziko apo Magento uye WordPress dzinoshandiswa pamwe chete. Iyo dzimwe nguva inogadzira bhodhoro mamiriro uye nekudaro pane nhamba yekuwedzera iyo inoshandiswa kugadzirisa mamiriro akadai. Kubatsira kukuru mune yakadaro kesi ndeyekuti hapana chikonzero chekupinda zvakasiyana uye zvakare iwe unogona kuzvibata zviri nyore. Iwo ekuwedzera anoshandiswa iBlog Pro uye Blog neaheadWorks.
WordPress inosanganiswa neMagento
Iye zvino zvinokwanisika kusanganisa WordPress ne Magento. Iyi nzira inobatsira mukupa kugadzikana uye kuwedzera kune WordPress uye Magento. Zvinozovhura mikana yakawanda yekuti ukure. Iwe unogona kushandisa MagePress, Fishpig, uye mamwe mawedzero akadaro.
Magento kusangana muWordPress
Iwe unogona zvakare kubatanidza mabhuroko e Magento ne WordPress kuti vauye nehurongwa huri nani hwekukurudzira. Zvichava nyore uye iwe unogona kushandisa plugins sekugutsikana kwako. Pane zvakawanda zvingasarudzwa zvekuti iwe usarudze kubva kumapulagi uye misoro - senge WordGento, Magento WordPress Kubatanidzwa, nezvimwewo.
Iwe haufanirwe kufunga kuti inoshanda sei kublogi uye eCommerce vanogona kuva pamwe chete. Ichakupa iwe zvakanyanya kusingaperi mhedzisiro nerubatsiro rwekurudziro system. Izvi zvinokupa iwe sarudzo dzakasarudzika uye zvakare gutsikana umo vatengi vanofarira.
Unoda a injini yekukurudzira yakagadzirirwa yako eCommerce mhinduro kana kuda rubatsiro pakugadzira yako eCommerce chitoro? Batana